Umjelo weSiteshi se-Eurostar ngu 50.45 km ubude okanye 31.5 miles. Iyafana 169 I-Eiffel Towers ibekwe apha ngasentla enye nenye
Izitimela ezihamba ngesantya esiphezulu se-Eurostar yinkonzo edibanisa iNtshona Yurophu ukuya eLondon naseKent e-United Kingdom, Unxibelelwano oluvela eYurophu yiParis naseLille eFrance, Brussels, kunye neAntwerp eBelgium, IRotterdam neAmsterdam eNetherlands. kwakhona, ungahamba ngololiwe ukusuka eLondon ukuya eDisneyland Paris (Isikhululo sikaloliwe iMarne La Vallee Chessy) kwaye kwakhona Iindawo ekuyiwa kuzo ngexesha elithile eFrance njengeMarseilles neMoutiers kwiiFrench Alps. Zonke izitimela ze-Eurostar ziwela iChannel yesiNgesi ngeThaneli yeThaneli.
Eurostar, amaxabiso etikiti awabizi ngexesha lokuphumla, ekuqaleni kweveki, nasemini. Embindini weveki uhambo lukaloliwe (uLwesibini, NgoLwesithathu nangoLwesine) ihlala inikezela ngamaxabiso aphantsi. Ngamaxabiso aphezulu, ungathathi i-Eurostar ekuseni kakhulu nangokuhlwa kwangoko evekini (ngenxa yabahambi abaninzi beshishini), kananjalo uphephe ukuthatha i-Eurostar ukukhwela ngoLwesihlanu kunye nangeCawa ngokuhlwa (ifanelekile iimpela-veki zokufika), ngexesha kwiiholide zikawonke-wonke nangeeholide zesikolo amaxabiso e-Eurostar skyrocket.
1) Inzuzo yokuhamba kwe-Eurostar kukuba uhambe kwaye ufike ngqo kumbindi wesixeko nakwezinye izixeko ohamba kuzo, Le nto yahluke kakhulu kuloliwe, ke ukuba uqeqesha uhambo olusuka eParis, Brussels, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, ILille okanye iLondon le sisibonelelo esikhulu kwi-Eurostar. Xa kuziwa Amaxabiso e-Eurostar, ihlala ihluke. Ezinye izinyuselo zikuvumela ukuba ufumane amatikiti ashibhile e-Eurostar. Kodwa ngeentsuku zokugqibela ngaphambi kokumka, amaxabiso aya esonyuka. Ukuba uthanda ukuhamba ngokugqibeleleyo, I-Eurostar yeyakho!
Yintoni umahluko phakathi komgangatho, Standard Premier, kunye neNkulumbuso yeShishini kwi-Eurostar?
Oololiwe be-Eurostar baneenkonzo zeklasi ezininzi ezenzelwe naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali, kwaye naluphi na uhlobo lokuhamba, Nokuba ungumhambi kwishishini okanye ulonwabo okanye zombini 🙂
Isikhululo sikaloliwe saseParis seEurostar sithethwa Paris Gare du Nord, isitishi sikaloliwe sikwisithili se-10 seParis, oko ikukuthi +-30 ukuhamba imizuzu ukusuka kwi-Notre Dame's Cathedral. Ukuthatha i-Eurostar, kuya kufuneka ungene esitishini kwaye unyuke 1 umgangatho ngaphakathi kweGare du Nord usebenzisa izifakelo ezikumbindi wesitishi.
the Brussels Midi-Zuid (EBrussels kumazantsi) Isikhululo sikumbindi weBrussels, kodwa qinisekisa ukuba uyayiqonda into oyifunayo Brussels Midi-Zuid kwaye hayi iBrussels Central Station, Isikhululo sikaloliwe saseBrussels Midi-Zuid sine 22 oololiwe beqonga, iofisi yetikiti le-Eurostar imi kufutshane neqonga 8. Itikiti lesitimela lase-Eurostar likuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo phakathi kweBrussels Midi Zuid kunye neBrussels Central.
Amsterdam Centraal (Station Amsterdam Central) ikumazantsi edolophu yaseAmsterdam ecaleni komfula, xa uphuma kwisikhululo sikaloliwe, Uyabona iAmsterdam Main Street izele zizinto ezinomtsalane ezinje ngoMadame Tussauds kwaye hayi ukusuka apho nakwisithili sokukhanya okuBomvu. Njengakwizikhululo ezininzi zikaloliwe ezinkulu eYurophu, unayo iidepho zemithwalo ezivula kwangoko kwaye zivaliwe emva kwexesha ukuba ufuna ukundwendwela nje 1 Ngemini okanye ngaphambi kokuba ungene ehotele.
Ngaphandle kweParis, London, Amsterdam and Brussels, Rotterdam, kunye noLille, I-Eurostar ikwasebenza imigca yamaxesha onyaka. Ngexesha lehlobo, phakathi kukaJulayi noSeptemba, abanye oololiwe base-Eurostar baya ngqo eAvignon naseMarseilles, Ngexesha lobusika iinyanga, phakathi kukaDisemba no-Epreli, Oololiwe base-Eurostar banokuya ngqo kwimimandla ye-ski kwiiAlps ezinjengeMoutiers okanye iBourg St Maurice eziziidolophu eziphambili ukusuka kwiindawo zokuphumla ezinjengeLaLange, Ukukhetha ezo, Iifonti kunye neVal Thorens.
Ukuba ufikelele ngoku, Uyazi yonke into oyifunayo malunga noololiwe bakho base-Eurostar kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho lohambo lwe-Eurostar SaveATrain.com